Ghọta Ihe Na-akpali Gị na Degree Psychology Degree »Mahadum Hodges
Categories: Bachelor, Apụta, Ntuziaka Ntanetị, Psychology
Nzere bachelọ na Psychology metụtara
Ebumnuche 10 kacha elu ị kwesịrị iji nweta nzere bachelọ na sayensị metụtara na Hodges U:
Ọmụmụ ihe gụnyere usoro agwakọtara nke vidiyo, na ị nwere ike isonye na mkparịta ụka ndụ na nkata na-enye uzo maka ahụmịhe ndị na-akọrọ na gburugburu ebe obibi.
Ọmụmụ omume ụmụ mmadụ, na otu esi akpali ndị ọzọ site na oru di iche-iche, na mkparita uka, gunyere umu akwukwo ihe mmuta “Experimental Psychology”
Mụta ihe usoro sayensị na-emetụta akparamàgwà mmadụ.
Zụlite nkà iche echiche siri ike ma tinye echiche nke uche na ọnọdụ idozi nsogbu.
Mee ka nkà nkwurita okwu ọnụ na nke ederede site na mkparita uka, oru ngo otu, na edemede.
Mụta otu esi ezo ndị ahịa gaa na ụlọ ọrụ obodo dabere na ọnọdụ ha na mkpa onye ahịa.
ịmụta ike ndị dabeere na obodo na-abịaru nso maka inyere ndị nọ ná mkpa aka.
Tinye aka na ezigbo mmụta gburugburu na-enyere gị aka idowe ozi site na anyị mkparịta ụka na nnwale.
Ubi Ebe Ndị Gụsịrị Akwụkwọ Na-arụ Ọrụ:
Ndụmọdụ useuseụ Ọgwụ
Alọ Ọrụ Obodo
Ndị gụsịrị akwụkwọ na ọnụọgụgụ nwere ike ịrụ ọrụ na:
Usekpụrụ Mmegbu Ndụmọdụ Ndụmọdụ Paykwụ Paygwọ na Echiche
BS na Usoro Nkà Mmụta Ọgwụ Psychology
Klas nke kacha mma: Bachelor nke kacha mma na Mmemme Psychology ejiri
Eziokwu Eziokwu: 2020 Kasị Mma Clinical, Ndụmọdụ & liedlọ Akwụkwọ Psychology
Ntuziaka nke Schoolslọ Akwụkwọ N'ịntanetị: 2020 kacha mma na kọleji dị na Florida
Mahadum: Kọleji kacha mma na ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara ndụmọdụ ọgụgụ isi na Florida
Schoolslọ Akwụkwọ Onlinelọ Akwụkwọ Online: Acclọ akwụkwọ kọleji a kwadoro dị elu na 2020
Schoolslọ akwụkwọ dị oke ọnụ: 25 Ọtụtụ Afflọ Ahịa Dị Nweta Online 4-Afọ Latinx / Hispanic-Serving Colleges
Cheryl Gonzales: BS na Psychology ejiri
Ọ dịghị mgbe m chere na ọ ga-ekwe m omume inweta akara ugo mmụta na mahadum. N'ihi mgbanwe nke mmemme ịntanetị na Mahadum Hodges, M abụọ ọmụmụ pụọ gụsịrị akwụkwọ na m Bachelor si Degree na Applied Psychology na m nwere ike ghara ịdị na-anya isi nke onwe m!